Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hotelada & Dalxiiska Wararka » Blossom Hotel Houston ayaa u diyaar garoobaya inuu soo baxo xagaaga dambe
Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Mareykanka
Blossom Hotel Houston, oo ah hantida raaxada ee ugu dambeysay oo ay soo bandhigtay Kooxda Blossom Holding Group ee caalamku aqoonsan yahay, ayaa lagu wadaa inay albaabadeeda furto xagaaga dambe. Waxay ku taallaa 7118 Bertner Avenue iyo dariska Xarunta Caafimaadka Texas, hudheelka raaxada leh wuxuu rajaynayaa inuu u soo bandhigo bulshada Houston iyo dad weynaha adeegyada caalamiga ah, cuntada wanaagsan, iyo meelaha munaasabadaha loogu talagalay si loogu keeno dalxiiska iyo ganacsiga labadaba magaalada.
Hoteelka kaliya ee raaxada ah ee dariska la ah Xarunta Caafimaadka Texas wuxuu siin doonaa meel laga helo oo lagu cusboonaysiiyo socotada iyo bulshada deegaanka.
Blossom Hotel Houston wuxuu siinayaa in ka badan 150 shaqooyin dadka deegaanka ah.
Kooxda Huteelka Blossom waxay muujiyeen sida ay uga go'an tahay bulshada intii ay socotay duufaantii jiilaalka ee waxyeellaysay sannadkan, hagaajinta tuubooyinkii burburay iyo caawinta ugu yaraan 120 qoys oo leh kharash buuxa.
“In kasta oo ay adag tahay 18 -kii bilood ee la soo dhaafay, annagu haddaan nahay Blossom Hotel Houston waxaan ku adkaysanaynaa u -heellanaantayada ku aaddan kobcinta dhaqaalaha maxalliga ah iyo saamaynta togan ee bulshada guud ahaan,” ayuu yiri Pete Shim, maamulaha guud ee Huteelka Blossom Houston. "Waxaan mudnaan siinaynaa sidii aan shaqo u siin lahayn dadka maxalliga ah oo leh in ka badan 150 shaqooyin waxaanan siinaynaa goob cusub dadka deegaanka si ay isugu yimaadaan oo ula dabaaldegaan kuwa ay jecel yihiin."
Blossom Hotel Houston ayaa dhawaan muujiyey sida ay uga go’an tahay bulshada maxalliga ah intii ay socdeen duufaantii jiilaalka ee waxyeellaysay horaantii sanadkan. Kooxda hudheelka, oo uu hoggaaminayo milkiilaha Charlie Wang, waxay caawiyeen shaqaalaha iyo xubnaha bulshada iyaga oo ka faa'idaysanaya shirkadda dhismaha ee Wang si ay u hagaajiyaan tuubooyin jabay, iyagoo ugu yaraan ka caawiyay 120 qoys oo kharashkoodu dhammaystiran yahay Wang. Ruuxaas beesha ayaa sii socon doona mustaqbalka iyada oo la wado qorshayaal lagu kobcinayo Houston iyada oo la siinayo tabarucaadyo kala duwan oo bulsheed.
Blossom Hotel Houston ayaa ka caawin doonta martida inay ogaadaan waxa ka dhigaya Houston meel gaar ah oo gaar ah oo la booqdo. Laga soo bilaabo goobteeda dhexe ee u dhow NRG Stadium, degmada matxafka caanka ah, dukaamaysiga, cunnada iyo meelaha madadaalada, hudheelka cusub wuxuu soo dhaweyn doonaa martida si loo ogaado astaamaha xiisaha leh ee ku xeeran iyo sidoo kale dib-u-cusboonaysiinta iyo dib-u-cusboonaysiinta goobta raaxada leh, martigalinta heer-caalami ah, iyo ganaax cuntada. Sidoo kale waa hudheelka kaliya ee raaxada leh ee dariska la ah xarunta caafimaad ee ugu weyn adduunka, oo martida siisa waayo -aragnimo martigelin oo sarreysa inta ay ka qaybgalayaan ballamaha iyo habraacyada.
Hoteelku wuxuu astaan ​​u yahay astaanta Houston ee ah Space City, huteelku wuxuu ka kooban yahay naqshad dayax-gacmeed leh oo leh qaab-dhismeed aad u yar, midabyo midab leh iyo goobo deggan oo laga heli karo guriga oo dhan. Goobaha shirarka ee hoteelka ayaa sidoo kale waxaa ka muuqda magacyo dayax-gacmeedku tilmaamayo oo ku saabsan isku xirnaanta hantida taariikhda aerospace-ka maxalliga ah iyo rafcaanka caalamiga ah.
Diyaaradda rakaabka ee Skyward Express ayaa ku burburtay dalka Kenya
Jamaica iyo Sacuudi Carabiya waxay sahamiyaan maalgashi ...
Hawaii waxay uga digeysaa dadka soo booqda waxyaabaha ku saabsan alaabta qorraxda la soo xasuusto